Ndị na-emepụta ngwaahịa - Onye na-ebupụ ngwaahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa dị elu
n'akuku ígwè (s235 s275 s355)
square ígwè tube A36
European ọkọlọtọ S355/S275...
S235 S275 S355 ígwè ọkpọkọ
Ọkpụkpụ ígwè bụ eriri ígwè nwere oghere nke a na-eji eme ihe maka ibufe mmiri dị ka mmanụ, gas,
Mmiri, gas, uzuoku, wdg, na mgbakwunye, na-ehulata, torsional ike n'otu oge ahụ, Mkpa ọkụ arọ, n'ihi ya, ọ na-eji ọtụtụ ebe.
Iji rụpụta akụkụ igwe na ihe owuwu injinịa. A na-ejikarị emepụta ngwa agha ndị a na-emekarị, egbe egbe, shells na ihe ndị ọzọ.
Nhazi nke tubes nchara: A na-ekewa tubes ígwè n'ime tubes ígwè na-enweghị ntụpọ na tubes ígwè welded (ya na tube crimson). Dị ka akụkụ udi na
Enwere ike kewaa ọkpọkọ gburugburu na ọkpọkọ pụrụ iche, nke a na-ejikarị bụ ọkpọkọ ígwè, ma e nwere ụfọdụ square, akụkụ anọ, ọkara okirikiri,
Hexagonal, triangle equilateral, octagonal na ọkpọkọ ígwè ndị ọzọ nwere ụdị pụrụ iche
s235JR s275jr s275jo s275j2 s275j2g3 s355jr s355j2g3 ígwè ọwa
1.The akụkụ obe nke ọwa ígwè bụ concave
2 .Ọwa ígwè elu na ala ụkwụ obosara bụ otu nkọwapụta nlereanya a na-egosipụta site elu mm) x obosara ụkwụ (mm)
X ọkpụrụkpụ úkwù (mm).
3 . Ọwa ígwè na-eme ka efere igbe ntọala ukwuu n'ime, ka nwere ofu bracket chere, ma ọ bụrụ na ike osisi, substation electric efere igbe.
A na-akpọ tubes ígwè ndị e ji otu mpempe ígwè mee nke na-enweghị eriri n'elu ya. Dị ka mmepụta usoro, enweghị nkebi pipe na-ekewa n'ime ọkụ akpọrepu ọkpọkọ, oyi akpọrepu ọkpọkọ, oyi mmasị ọkpọkọ, extrusion ọkpọkọ, ọkpọkọ jacking, wdg Dị ka udi nke ngalaba, enweghị nkebi ígwè tube na-ekewa n'ime gburugburu na pụrụ iche ekara. tube pụrụ iche nwere square, oval, triangle, hexagonal, mkpụrụ egusi, kpakpando, tube nwere nku na ụdị dị mgbagwoju anya dị iche iche. Dị ka ojiji dị iche iche si dị, enwere ọkpọkọ mgbidi na ọkpọkọ mgbidi dị mkpa. A na-ejikarị ọkpọkọ igwe anaghị agba nchara dị ka mmanụ ala geology mkpọpu ọkpọkọ, petrochemical cracking pipe, ji esi mmiri ọkụ ọkpọkọ, ebu ọkpọkọ na ụgbọ ala, traktọ, ụgbọ elu elu-nkenke structural ígwè ọkpọkọ.
Igwe nkuku, nke a na-akpọkarị iron Angle, bụ akụkụ abụọ nke akụkụ kwụ ọtọ ka ọ bụrụ ọdịdị nke warara ígwè. Nhazi nke nchara nchara
Akụkụ bụ akụkụ nha nhata na akụkụ enweghị nha. Akụkụ abụọ nke akụkụ nha nha nhata obosara. Ya nkọwa ka
Obosara x obosara x ọkpụrụkpụ na millimeters. Dịka ọmụmaatụ, /30x30x3 na-egosi na obosara akụkụ bụ 30
mm equilateral Angle ígwè nwere akụkụ akụkụ 3 mm. Ọ nwekwara ike na-anọchi anya ihe nlereanya, nke bụ ọnụ ọgụgụ nke centimita nke obosara akụkụ,
Dị ka / 3 #. Nlereanya anaghị anọchi anya nha nha nha dị iche iche n'otu ụdị, yabụ na nkwekọrịta na akwụkwọ ndị ọzọ
Ogologo akụkụ na ọkpụrụkpụ akụkụ nke nchara nchara kwesịrị ijupụta kpamkpam. Na-ekpo ọkụ akpọrepu equilateral akụkụ ígwè
Nkọwapụta bụ 2#-20#.
Ojiji nchara nchara
Enwere ike iji ihe nrụgide dị iche iche mejupụtara nchara nchara dịka mkpa dị iche iche nke nhazi ahụ si dị, a pụkwara iji ya mee ihe dị ka njikọ n'etiti ihe ndị dị na ya.
Ọ dị mma. A na-eji ya eme ihe n'ụdị ihe owuwu ụlọ na ụlọ injinia, dị ka ibé, àkwà mmiri, ụlọ elu nnyefe, cranes.
Igwe na-ebu ibu dị arọ, ụgbọ mmiri, ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ elu mmeghachi omume, igbe akpa na shelves ụlọ nkwakọba ihe, wdg.
s235joh / s235j2h oké mgbidi structural square ígwè anwụrụ / tube
Nkọwa ngwaahịa ntụkwasị obi kacha mma yana akara kredit dị ukwuu bụ ụkpụrụ anyị, nke ga-enyere anyị aka n'ọkwa dị elu. Adhering for the tenet of “quality first, customers supreme” for Hot Sale for China Steel Pipe (EN10219 S235JOH S235J2H), Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka guzosie ike imekọ ihe ọnụ na ike a na-egbuke egbuke ọdịnihu ọnụ na anyị. Hot ire maka China Steel Pipe, Steel Tube, Anyị nwere ugbu a raara onwe ya nye na ike ike ahịa otu, na ọtụtụ alaka, nri t ...
S235JR S275JR S275J2H S355JR Ogwe okirikiri ihe eji eme ihe igwe mkpanaka ígwè katọn katọn ígwè gburugburu mmanya.
Nchara gburugburu bụ eriri siri ike nke ígwè nwere akụkụ obe okirikiri. A na-egosipụta nkọwa ya na millimeters nke dayameta, dị ka "50" maka 50 mm dayameta gburugburu ígwè.
A na-ekewa nchara gburugburu ka ọ bụrụ mpịakọta na-ekpo ọkụ, ịhịa aka na eserese oyi. Na-ekpo ọkụ akpọrepu gburugburu ígwè bụ 5.5-250mm n'ogo. N'ime ha: 5.5-25mm obere nchara gburugburu na-enyekarị ya na ngwugwu ogologo, nke a na-ejikarị dị ka nkwado, bolts na akụkụ dị iche iche nke ígwè ọrụ; Nchara gbara okirikiri buru ibu karịa 25 mm, eji tumadi maka akụkụ igwe ma ọ bụ ọdịda nchara na-enweghị nkebi. Nchara gburugburu bụ eriri siri ike nke ígwè nwere akụkụ obe okirikiri. A na-egosipụta nkọwa ya na millimeters nke dayameta, dịka "50 pụtara dayameta 50 mm gburugburu ígwè
S355J2H/S355JO/S355J2/S275JOH enweghị nkebi/ERW Square akụkụ anọ oghere ngalaba Steel Tube
Square tube ojiji na-ewu, ígwè n'ichepụta, ígwè ewu oru ngo, shipbuilding, anyanwụ ike ọgbọ nkwado, ígwè Ọdịdị engineering, ọkụ eletrik
Ngwaahịa square tubular ngwaahịa square tubular
Injinia ọkụ, ụlọ ọrụ ọkụ, igwe ọrụ ugbo na kemịkalụ, mgbidi enyo enyo, chassis ụgbọ ala, ihe owuwu ọdụ ụgbọ elu, okporo ụzọ okporo ụzọ, ihe owuwu ụlọ, arịa nrụgide, tankị nchekwa mmanụ, akwa akwa, ngwa osisi ọkụ, igwe ebuli na ụgbọ njem na igwe ndị ọzọ dị elu welded ihe owuwu, wdg
Nkewa usoro mpịachi
Dị ka mmepụta usoro, na square tube na-ekewa na-ekpo ọkụ akpọrepu enweghị nkebi square tube, oyi mmasị enweghị nkebi square tube, extruded enweghị nkebi square tube na welded square tube.
A572GR50 A36 ígwè gburugburu / mmanya
Okwu mmeghe nke ngwaahịa Anyị bụ ndị nrụpụta nwere ahụmahụ. Wining the most from the crucial certifications of its market for Excellent quality China S355j2h/S355jo/S355j2/S275joh Seamless/ERW Square Rectangular Hollow Section Steel Tube , We sincerely welcome buyers from both at your house and overseas to come to barter organization with us. Akụkụ dị mma nke China Hollow, Pipe Rectangular, N'ebumnuche nke "na-asọrịta mpi na ịdị mma na ịzụlite na okike" na ...
Nkọwa ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ n'ikwesị ntụkwasị obi, na-eje ozi na atụmanya anyị niile, ma na-arụ ọrụ na teknụzụ ọhụrụ na igwe ọhụrụ ugboro ugboro maka ọbịbịa China Carbon Steel Seamless Pipe&Tube A36 A355 P5 P11 , N'ịwa ụkpụrụ, Ijere ahịa!" bụ ebumnobi anyị na-achụ. Anyị na-atụ anya n'ezie na ndị ahịa niile ga-eme ka anyị na anyị na-arụkọ ọrụ ogologo oge na nke ọma.
A572 GR50 square tube / SQUARE ígwè PIPE
Nkọwa ngwaahịa ntụkwasị obi kacha mma yana akara kredit dị ukwuu bụ ụkpụrụ anyị, nke ga-enyere anyị aka n'ọkwa dị elu. Adhering for the tenet of “quality first, customers supreme” for Hot Sale for China Steel Pipe (EN10219 S235JOH S235J2H A572GR50 A36 275JOH S355 J2H ), Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị ka guzosie ike imekọ ihe ọnụ na ike a na-egbuke egbuke ọdịnihu ọnụ na anyị. Hot ire maka China Steel Pipe, Steel Tube, Anyị nwere ugbu a raara onwe ya nye na ike ike ahịa otu ...
Efere ígwè (A36 Q235 Q345 S275JR S235JR S355JR S355j2)
Steel efere maka elu-ịrị elu ụlọ Ọdịdị:Q235JGC,Q345JGC,Q390JGC,Q420GJC,Q460GJC.
Steel efere maka akwa Ọdịdị: Q235qC, Q345qC, 16Mnq, Q370qC, Q420qC, 14MnNbq.
Yiri efere ígwè na-eguzogide ọgwụ: NM360A, NM400A, NM360B, NM400B
A na-eji H - beam eme ihe n'ụlọ arụ ọrụ nchara n'oge a. Ọ nwere ọtụtụ ọdịiche na I-beam.
1) flange. Ihe dị n'ime nke flanges enweghị mmasị na elu na elu ala dị n'otu. 2) Akụkụ abụọ dị n'èzí na n'ime nke nchara H enweghị mkpọda ma kwụ ọtọ.
3) Àgwàetiti cross-ngalaba nke H-beams doro anya karịa ka omenala I-beams, ọwa na akụkụ.
4) H akụkụ ígwè, bụ ụdị nke ngalaba mpaghara oke na-kacha mma, ike na arọ ruru bụ ihe ezi uche aku ngalaba nke elu arụmọrụ profaịlụ, n'ihi na nke ngalaba na British
Akparamagwa "H" otu aha ahụ. Nke a na-eme ka ịgbado ọkụ splicing nke H-beams mfe ịrụ ọrụ karịa I-ibe na nwere mma n'ibu Njirimara kwa unit arọ.
Iji chekwaa ọtụtụ ihe na oge owuwu. A na-emepụta nkọwapụta nke ígwè dị ka H n'ụzọ akụ na ụba, oge nkeji oge ya, ọnụọgụ ọnụọgụ, nkwụsị nrụgide na ibu ibu dị elu karịa nke ígwè na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke nwere otu ịdị arọ.